Wasiir Odawaa iyo Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Saxaafadda kula hadlay Baledweyne (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo galabta gaaray Magaalada Baledweyne, ayaa waxaa ku soo dhaweeyay masuuliyiin uu horkacaayay Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed), Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan.
Wasiirka iyo Gudoomiyaha oo si wada jir ah Warbaahinta ula hadlay, ayaa waxay ka warbixiyeen socdaalka wafdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha, ay ku yimaadeen Xarunta Gobolka Hiiraan.
Wasiirka, ayaa yiri “Anniga iyo xubnaha socdaalka igu wehliya, safarkeenu wuxuu la xiriira sidii loo amba qaadi lahaa la tashiyada ku saabsan Dhismaha Maamulka labada gobol. Dabcan caqabado wey jiraan, waxaan isku deyi doonnaa in aan dhameyno wixii khilaaf ah ee jira.”
Waxaa kaloo uu yiri “Waanu sii joogaynaa Magaalada Baledweyne illaa inta laga af-jarayo muranka ka taagan Maamul U Samaynta Gobolada Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe. Wada tashiyo kala duwan ayaaan la yeelan doonnaa qaybaha bulshada iyo duubabka dhaqanka.”
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan, ayaa isna xaqiijiyay in wefdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, ay Magaalada Baledweyne u yimaadeen, sidii horey loogu sii amba qaadi lahaa Shirka Maamul U Samaynta Gobolada Hiiraan & Shabellaha Dhexe.
Gudoomiyaha, ayaa tilmaamay in wefdiga Wasiirka ay kulamo la leeyihiin Odayaasha Golaha Dhaqanka Gobolka Hiiraan, si la isaga soo dhawaaado arrimaha adag ee labada dhinac isu hayaan.
Yuusuf Axmed Hagar, ayaa ku waramayaa in bulshada labada gobol aanay is diidanayn, balse uu jiro is maandhaaf, isla-markaana uu rajeynaayo in wada hadaladan lagu soo afjaro khilaafka taagan.